Comedy Archives - Real News
By Siberian BirdPosted on October 14, 2019
13.10.2019 ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား အောင်လအန်ဆိုင်း နဲ့ ဗီရာတို့ပွဲဟာ ဆိုရင်တော့ တစ်မ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အောင်လရဲ့ ထိုးကွက် တိုက်ကွက်တွေကြားထဲမှာ ဗီရာတစ်ရောက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ အောင်လ နိုင်ခဲ့ပါတယ်.ဗီရာ ဟာ အောင်လ ကို ဘယ်နေရာမှာမှ […]
ဒီမိန်းမယူမိလို့ ငါပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်နေရတာ
By Siberian BirdPosted on October 5, 2019 October 5, 2019
ယောက်ျားတယောက်ဟာ… တောထဲကနေသစ်တုံးကြီးတစ်တုံးကို မနိင်မနင်းနဲ့သူ့အိမ်ဆီထမ်းလာရင်း လမ်းမှာစဉ်းစားလာရော… ‘သည်မိန်းမယူမိလို့ ငါပင်ပင်ပမ်းပမ်း လုပ်နေရတာ၊ ^တော်ပြီ သည်တစ်ခါအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကွာတော့မယ်ပေါ့… မိန်းမကလည်းမိန်းမပဲ ပါးပါးလှစ်လှစ်လေးရယ်~ ယောက်ျားကစိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ သစ်တုံးကိုဝုန်းကနဲပစ်ချလိုက်ကတဲက ရိပ်မိတာပေါ့။ “အော်.မောင်ရယ် ဒီလောက်အလေးကြီးဘာလို့သယ်လာတာတုန်း? ရော့ရော့ လျှော်ထားတဲ့ပုဆိုးအသစ်လေးနဲ့ချွေးသုတ်လိုက် ရေအရင်ချိုးမလား? ထမင်းအရင်စားမလား? […]
ဖြတ်သွားသူတိုင်း ကုသိုလ်ရစေတဲ့ မြောက်ဥက္ကလာက ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ပြတင်းပေါက်ပါသောတံတား
By Siberian BirdPosted on June 29, 2019
ရန်ကုန်မြို့အမွေအနှစ်တံတားလေးဟာဖြင့် မြောက်ဥက္ကလာ ဝင်ဝင်ချင်းလေးမှာ သဘာဝအတိုင်း ယိုယိုယွင်းယွင်းလေး အလှမပျက်စွာနှင့် ရန်ကုန်မြို့ခရီးသွားပြည်သူများသာမက ကမ္ဘာအရပ်က ခရီးသွားပြည်သူများကိုပါ စောင့်ကြိုလျက်ရှိ နေပါသည်။တံတားပေါ်တက်ရောက်သော ယဉ်များအန္တရာယ်ကင်းဝေးနိုင်ရေးအတွက်လည်း လမ်းဝတံတားခြေရင်းနားမှာ မီးသတ် ဌာနကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ပေးထားပါသည်။ တံတားပေါ်တက်နေစဉ် ရုတ်တရက် တံတားပြိုကျခဲ့သော် အရေးပေါ် […]
ဖြူဖြူထွေးကို ကြိုက်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး လို့ပြောလာတဲ့ ခြိမ့်ကေကို….
By Moe MarnPosted on March 22, 2019
Zawgyicodeဖြင့်ဖတ်ရန် တစ် ခွင်မှာတော့တစ်နေ့တစ်မျိုးမပျင်းရအောင်ကို အမျိုးမျိုးရယ်စရာတွေ ၊Facebook Cele တွေတိုးပွားလာပါတယ်။ တချို့ကကျတမင်နာမည်ကြီးချင်တာကြောင့် သက်သက်မဲ့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်နေတာမျိုးတွေရှိသလို တချို့ကြတော့လည်း မယောင်မလည်ရိုးရိုးသားပုံစံလေးတွေနဲ့ နာမည်ကြီးလာကြပါတယ်။ မယောင် မလည်ရောက်လာပြီးနာမည်ကြီးသွားတဲ့အထဲမှာ ခြိမ့်ကေကို (ငှက်ပျောသီး)တစ်ယောက်လည်းပါပါတယ်။ သူက Media9 နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြသွားတာတွေရှိပါတယ်။ […]
ကျွန် မ ရှက် တယ်တော့…. ဟိုနေ့ ကလည်း အမေ့ရှေ့တောင် မရှောင် လာလုပ်လို့တစ်ခါ ပြောထားသေးတာ မမှတ်ဘူးလား….”
Zawgyicodeဖြင့်ဖတ်ရန် ကိုယ် ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့လို့ တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ် ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့ပြောတာကို တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် “မရ ဘူး…ရှင့်ကို ရာအိမ်မှူ […]
ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေစဉ် ငါးမိနစ်အတွင်းမှာပဲ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ စက်အဖွဲ့သားတစ်ဦးအတွက် ယူကြုံးမရဖြစ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် မအေးသောင်း
By Htet Moe ThuPosted on March 8, 2019
ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေစဉ် ငါးမိနစ်အတွင်းမှာပဲ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ စက်အဖွဲ့သားတစ်ဦးအတွက် ယူကြုံးမရဖြစ်နေတဲ့ မအေးသောင်း မအေးသောင်းတစ်ယောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေစဉ်မှာ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့ရ တဲ့ စက်အဖွဲ့သားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမျိုးကျော် အတွက် အတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က မနက်ခင်းပိုင်းလေးမှာတင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး နေ့မြင်ညပျောက်ဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်းပဲ ဘယ်သူမှထင်မှတ်မထားတဲ့အချိန်မှာပဲ […]
By Htet Moe ThuPosted on March 5, 2019
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ခန့်က မြန်မာယူ-၂၀ အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းကို နယူးဇီလန် ကမ္ဘာ့ဖလားထံ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားသမား ကျော်မင်းဦးဟာ ဒဏ်ရာကြောင့် ဘောလုံးသမားဘဝကနေ အပြီးတိုင်အနားယူခဲ့ပြီလို့ တရားဝင်ကြေငြာခဲ့ပြီးနောက် သူအရမ်းချစ်တဲ့ မြက်ခင်းစိမ်းတွေကို မျက်ရည်များနဲ့ ကျောခိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဘောလုံးလောကကို […]
လှိုင်သာယာ တွင် မိန်းမအဖြစ် မှ ယောက်က်ျား အဖြစ် သို့ရောက်သွားတဲ့ ထူးဆန်းဖြစ်ရပ်
By Moe MarnPosted on January 19, 2019
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် သ ရုပ်ဆောင် နိုင်လူကတော့ လှိုင်သာယာက ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပရိသတ်တွေက သတ်မှတ်ထားပေမယ့်လည်း လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်တွေဟာ ဇာတ်တစ်ခုလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးပုံဖော်ဖန်တီးကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနိုင်လူကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားပြီး ပရိသတ်တွေအားကျရတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိုပါ […]
ရုတ်တရက်ဆိုတော့ မုန်လာဥတုတ်တုတ်ကြီးကိုင်ပြီး ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ မရီမြင့်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ဒုက္ခ
By Moe MarnPosted on December 5, 2018
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ဈေးထဲက ဇာတ်​လမ်း အနုပညာ ပုရစ်တွေ ပုံပြီးရောင်းနေတဲ့ ​ဈေးသည်​ကရက်ကြာလို့ မလတ်ဆတ်တော့တဲ သူ့ပုရစ်ပုံပေါ် ပုရစ်အရှင် သုံးလေးကောင်ကို ခြေထောက်ချိုးပြီး ရောထည့်ထားတယ် ခြေတောက်ကျိုးနေတဲ့ ပုရစ်ကလေးတွေကပုရစ်ပုံကြီးပေါ်မှာ လောက်လက်လောက်လက်နဲ့ ဟိုသွားလိုက် ဒီတက်လိုက်နဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် […]
By Moe Gyi AungPosted on November 18, 2018
တောဘုန်းကြီး အရှင်ဘုရား ရပ်တော်မူပါဦးဘုရား မလှမ်းမကမ်းမှ အော်သံကြောင့် ရှင်ဇနိတ ခြေစုံရပ်လိုက် မိသည်။ရုံထားသော သင်္ဃန်းစ ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်စေရန် ဆွဲဆန့်ပြုပြင်ရင်း စက္ခုနှစ်စုံ အသာချကာ လက်ထဲကသပိတ်ကို ကျနစွာဖွင့်ရန်ပြင်၏။ အသက်(၅၀)ဝန်းကျင်ခန့်ဒကာမကြီးတစ်ဦးနှင့်၅နှစ်သား အရွယ် ကောင်လေးတယောက် အိမ်တအိမ်ထဲမှထွက် […]